Karazana fandotoana rano: toetra sy vokany | Green Renewable
Ny fandotoana ny rano dia fiovana simika, ara-batana na biolojika amin'ny kalitaon'ny rano izay misy fiantraikany ratsy sy manimba ny zavamananaina mihinana azy. Ny foto-kevitra momba ny rano maloto dia manondro ny fanangonan-karena sy ny fifantohana amin'ny akora iray na maromaro ankoatry ny rano mitovy amin'izany ka mahatonga ny tsy fifandanjana eo amin'ny fiainana biolojika, ny fihinanana olona, ​​ny indostria, ny fambolena, ny jono sy ny fialam-boly ary ny olana amin'ny biby. Misy maro karazana fandotoana rano arakaraka ny niaviany sy ny fahasimbany.
Noho izany, hanokana ity lahatsoratra ity izahay mba hilaza aminao ny karazana fandotoana rano misy ary inona no vokany.
1 Karazana fandotoana rano
1.2 Rano ambonin'ny tany
1.4 Fandotoana ambanin'ny tany
1.5 Fandotoana mikraoba
1.6 Fandotoana amin'ny zavatra mihantona
1.7 Fandotoana simika amin'ny rano
1.8 Fandotoana ara-tsakafo
2 Loharano sy karazana fandotoana rano
3 Karazana loto
3.1 Ny microorganisms pathogenic
3.2 Fako organika
3.3 Simika inorganika
3.4 Fitonutrients tsy organika
3.5 Tambajotra organika
Saika misy fiantraikany eo an-toerana hatrany amin'ny bibidia na ny zavamananaina anaty rano ny fiparitahan'ny solika, Saingy lehibe ny mety hiparitaka.
Miraikitra amin’ny volon’ny voron-dranomasina ny menaka, ka mametra ny fahafahany milomano na manidina, ka mamono ny trondro. Niteraka fahalotoan'ny ranomasina ny fitomboan'ny fiparitahan'ny solika sy ny fiparitahan'ny sambo. Fanamarihana manan-danja: Ny menaka dia tsy levona anaty rano ary hamorona sosona menaka matevina ao anaty rano, hanempotra trondro ary manakana ny hazavana avy amin'ny zavamaniry anaty rano misy fotosintetika.
Rano ambonin'ny tany
Ny rano ambonin'ny tany dia ahitana ny rano voajanahary hita eny ambonin'ny tany, toy ny renirano, farihy, dobo ary ranomasina. Ireo akora ireo dia mifandray amin'ny rano ary levona na afangaro ara-batana ao.
Misy microorganisms ao amin'ny vatan'ny rano. Anisan'izany ny zavamananaina aerobic sy anaerobic.. Matetika ny rano dia misy zavamiaina bitika, na aerobic na anaerobic, miankina amin'ny akora azo simbaina mihantona ao anaty rano.
Ny zavamiaina bitika be loatra dia mandany sy mandany oksizenina, mamono ireo zavamananaina aerôbika ary mamokatra poizina manimba toy ny amoniaka sy solifara.
Fandotoana ambanin'ny tany
Ny pestiside sy ny akora simika mifandraika amin'ny tany dia entin'ny ranon'orana ary mitsonika ao anaty tany, ka mandoto ny rano ambanin'ny tany.
Any amin’ny tany an-dalam-pandrosoana, ny olona dia misotro mivantana avy amin’ny renirano, na renirano, na loharano hafa. Indraindray dia hisy fandotoana voajanahary ateraky ny zavamiaina bitika toy ny viriosy, bakteria ary protozoa.
Azo inoana fa io fandotoana voajanahary io miteraka aretina mahafaty sy mahafaty ny trondro sy ny karazam-biby hafa.
Fandotoana amin'ny zavatra mihantona
Tsy ny zavatra simika rehetra no mora levona anaty rano. Ireo no antsoina hoe "sombimanga." Ireo karazana akora ireo dia mety hanimba na hamono ireo zavamananaina anaty rano.
Fandotoana simika amin'ny rano
Malaza ny mahita ny fomba fampiasan'ny indostria isan-karazany ireo akora simika ariana mivantana any anaty loharano. Ny agrochemical ampiasaina be loatra amin'ny fambolena mba hifehezana ny bibikely sy ny aretina dia hivarina any amin'ny renirano amin'ny farany, manapoizina ny zavamananaina anaty rano, mamono ny zavamananaina ary mampidi-doza ny ain'olombelona.
Imbetsaka isika no milaza fa ny rano dia manana sakafo mahasalama ho an'ny zavamananaina, ka tsy ilaina ny manadio azy. Saingy nanova ny toe-javatra rehetra ny fahitana ny zezika fambolena sy indostrialy avo lenta amin'ny rano fisotro.
Ny maloto, ny zezika ary ny maloto dia misy otrikaina be dia be izay afaka mandrisika ny fitomboan'ny ahidrano sy ny ahi-dratsy ao anaty rano, ka mahatonga azy ho tsy azo sotroina ary na dia ny filtres aza mibahana.
Mandoto ny rano eny amin'ny renirano sy renirano ary farihy ny fikorianan'ny zezika avy amin'ny tany fambolena mandra-pahatongany any an-dranomasina. Ny zezika dia manankarena amin'ny otrikaina isan-karazany ilaina amin'ny fiainan'ny zavamaniry, ary ny rano madio vokarina dia manova ny fifandanjana voajanahary amin'ny otrikaina ilaina ho an'ny zavamaniry anaty rano.
Loharano sy karazana fandotoana rano
Ny loharanon'ny fahalotoan'ny olombelona izay misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny rano dia matetika mizara ho karazany roa:
Point loharanon'ny loto
Loharano fandotoana tsy misy teboka
Andeha hojerentsika ny tsirairay amin'izy ireo:
Loharanon'ny loto: Loharanon'ny fandotoana dia ilazana loharanon'ny loto izay mamoaka loto tokana na miavaka amin'ny faritra iray mitoka-monina na voafetra. Ny fomba hahatongavana: ny fivoahan'ny rano maloto ao an-trano, ny fivoahan'ny rano maloto indostrialy, ny fako mampidi-doza, ny fanariana ny harena ankibon'ny tany, ny fivoahana, ny fivoahana tsy nahy, sns.
Loharano fandotoana miparitaka: Loharanon'ny fiparitahana izy ireo, ao anatin'izany ny hetsika izay mandrakotra faritra midadasika izay mety hiteraka fandotoana ambanin'ny tany, ary azo antoka fa tsy azo faritana amin'ny fomba azo antoka sy marina. Ohatra avy amin'ny loharano sasany: fambolena sy fiompiana, fanarian-drano an-tanàn-dehibe, fampiasana ny tany, fanariam-pako, fanariam-pako amin'ny atmosfera, ary asa fialam-boly.
Loharanon'ny loto voajanahary: Izy ireo dia manondro ny afo na ny asan'ny volkano.
Loharanon'ny fandotoana ara-teknolojia: Ity karazana fandotoana ity dia mifototra amin'ny fanjifana indostrialy sy an-trano, ao anatin'izany ny fitaterana maotera izay mila menaka.
Ny microorganisms pathogenic
Ity karazana loto ity dia vokarin'ny microorganisms, toy ny bakteria, viriosy, protozoa Mety hitarika aretina lehibe toy ny kôlerà, typhus, ary hepatita izany.
Ny niaviany dia ny fako vokatry ny asan’ny olombelona, ​​toy ny biby fiompy. Ny fisian'ny akora biodegradable na mora simba ao anaty rano dia mampiroborobo ny fitomboan'ny bakteria aerôbika izay mandany ny oksizenina misy. Ny hypoxia dia manasarotra ny fiveloman'ny zavamananaina aerôbika, ary ny zavamananaina anaerobic dia mamoaka akora misy poizina toy ny amoniaka na solifara.
Toy izany koa ny asidra sy sira ary metaly misy poizina. Amin'ny fifantohana avo dia mety hiteraka fahasimbana lehibe amin'ny zavamananaina, fihenan'ny vokatra amin'ny famokarana fambolena sy ny harafesina ny fitaovana miasa.
Fitonutrients tsy organika
Toy izany koa ny nitrate sy phosphate. Izy ireo dia akora mety levona ilaina ho an'ny fivoaran'ny zavamaniry ary afaka manentana ny fitomboan'ny ahidrano sy ny zavamananaina hafa. Ity karazana loto ity dia mety hitarika amin'ny eutrophication ny vatan-drano, izay mitaky ny fampiasana ny oksizenina rehetra misy. Manakana ny asan'ny zavamananaina hafa izany ary mampihena ny fahasamihafan'ny zavamananaina ao anaty rano.
Toy ny solika, lasantsy, plastika, pestisida, Sns Izy ireo dia akora azo tazonina ao anaty rano mandritra ny fotoana maharitra ary sarotra ho an'ny zavamiaina bitika simba.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny karazana fandotoana rano misy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Karazana fandotoana rano